Eyona ndawo iphantsi yeGusseted Pouches yoMvelisi kunye neFektri | Guoshengli
Ezantsi Gusseted Pouches Inkcazo
Iibhegi zangaphantsi zegusset zezona zisetyenziswayo zihlala zisetyenziswa. Iigussets ezisezantsi zifumaneka emazantsi eebhegi eziguqukayo. Zahlulahlulwe zahlulwa zaba lilimi ezantsi, itywina le-K, kunye neegussets ezingqukuva ezisezantsi. I-K-Seal Bottom kunye nePlow Bottom gusset pouches ziguqulwa ukusuka kwiijikelezo ezisezantsi zegusset ukuze ufumane amandla ngakumbi. Iipotshi ezantsi ezinama gusseted zime nkqo kwaye zihlala zisebenza ngakumbi ngokobungakanani kunye nokumila, ezinokwakhiwa ngokukodwa ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zemveliso yakho.
Iimpawu ezongezelelekileyo zeengxowa zegusset ezisezantsi
● Ukukhahlela inotshi: kulula ukukrazula ngaphandle kwezixhobo
● Iziphu ezinophando: ukutywina okuhle kunye nokuphinda kusetyenziswe
● I-Degassing Valve: isetyenziselwa ukupakisha ikofu, ivumela ikharbon diokside ukuba ibaleke engxoweni ngaphandle kokuvumela ioksijini ukuba ibuye, iqinisekisa ubomi beshelfu obude, incasa efanelekileyo kunye nokutsha.
● Coca ifestile: abathengi abaninzi bafuna ukubona umxholo wokupakisha ngaphambi kokuthenga. Ukongeza ifestile ebonakalayo kungabonisa umgangatho weemveliso.
● Ukushicilelwa ngokugqibeleleyo: imibala ephezulu kunye nemizobo iya kunceda iimveliso zakho zivelele kwiishelufa zentengiso. Unokukhetha izinto ezicwebezelayo ezibonakalayo kwindawo yokupakisha matte ukutsala umdla wabathengi. Kwakhona, itekhnoloji ye-holographic kunye ne-glazing kunye netekhnoloji yesinyithi iya kwenza ukuba iipakethe zakho zokubopha eziguquguqukayo zibonakale.
● Uyilo olukhethekileyo olumiselweyo: lunokunqunyulwa phantse nakweyiphi na imilo, ukubamba iliso okungcono kuneengxowa eziqhelekileyo
● Umngxunya wokuxhoma: iingxowa ezinomngxunya osikwe ngaphambili zivumela ukuba zixhonywe ngokulula kumagwegwe ukuze ziboniswe ngendlela enomtsalane.
● Ukhetho olongezelelweyo luyafumaneka xa uceliwe
Indlela yokulinganisa yimani iingxowa gusset ezantsi?
● Iziphumo zeBrand: Ukusukela ngo-1999, singamaTshayina akhokelela kumenzi wokupakisha oguqukayo ngaphezulu kweminyaka engama-20;
● Ubungakanani besiko kunye nokuPrinta: I-Flexible rollstocks kunye neepakethi zingenziwa ngokobungakanani obufunekayo kunye nokuprinta
● Iinkonzo zokumisa kanye: Sixelele into oyifunayo, kwaye siza kukubonelela ngesisombululo esipheleleyo kunye neenkonzo
● Ixesha elifutshane lokuKhokela: Iiseti ezi-6 zoomatshini bokushicilela kunye neeseti ezingama-49 zoomatshini abaguqulayo, sinokugqiba ukuhambisa iimveliso zakho ngexesha.
● Uqinisekiso lomgangatho: Inkqubo yolawulo lomgangatho engqongqo ye-ISO, i-SGS qinisekisa ukuba zonke ziyahambelana nezicelo zakho!
● Inkonzo ethembekileyo: Sisoloko simi ngakuwe, phendula imibuzo yakho kwaye usombulule ingxaki yakho, nokuba ungathengisa ngaphambili okanye emva kokuthengisa.
Okuninzi okungaphantsi kweGusseted Pouches Imifanekiso
Egqithileyo Ifilimu yeRollstock
Okulandelayo: Flat Ezantsi Pouches